Wararka Maanta: Isniin, July 30, 2018-Trump oo laga codsaday in uusan cadow ku tilmaamin warbaahinta
Isniin, July, 30, 2018 (HOL) – Soo saaraha wargeyska New York Times ayaa uga digay Madaxweyne Trump in weerarka uu ku hayo saxaafadda in uu yahay mid khilaafka sii badinaya oo halis ku ah Maraykanka.
A G Sulzberger ayaa soo saaray hadal qoraal ah kaddib markii Donald Trump uu twitterka ku qoray kulan uu horraantii bishan la yeeshay isaga.
Trump ayaa sheegay in ay ka wada hadleen ilaa iyo inta wararka beenta ah lagu daabacoyo warbaahinta.
Laakin Mr Sulzberg ayaa sheegay in uu u sheegay Mr Trump erayga Wararka Beenta ah in aanay xaqiiqo ahayn ayna yihiin kuwa wax dhaawacaya.
Waxa uu intaasi ku daray in hadallada xanafta leh ee madaxweynaha ay sare u qaadayaan khatarta ku imaankarta weriyeyaasha oo ay ku jiraan dowladaha kale.